Ukuvavanya i-HTC Desire S (II) | I-Androidsis
Isikhokelo esisisiseko se-Android
Yenza ngokwezifiso i-Android
Khuphela i-WhatsApp mahala
Khuphela i-WhatsApp Plus simahla
Khuphela i-WhatsApp ye-Android
Khuphela i-WhatsApp yeThebhulethi
Ukuvavanya i-HTC Desire S (II)
el_uliulius | | nokuVavanyelwa, Reviews
Ku Inqaku lokuqala esele sikuxelele malunga noMnqweno S. Kwakuluhlalutyo ikakhulu kuyilo, izixhobo kunye nezixhobo zekhompyutha. Inqaku lesibini liza kugxila kwisoftware ebandakanya esi sixhobo, ukusebenzisana nomsebenzisi kunye nendlela esebenza ngayo.
Yitsho ukuba esi siginali siza kunye ne última Inguqulelo yamaphepha okugqibela e-Android (izisa i-Android 2.3.3) kunye ne-Sense 2.1. Kulabo abangaziyo ukuba yintoni i-Sense, lujongano olwenziwe yi-HTC ukulawula iiterminal zabo. IMotorola ineMotoblur, umzekelo. Le nguqulo ye-Sense iyafana ne-Desire HD iyifaka kuhlaziyo lwayo kwaye iphuculwe kancinci kunaleyo i-Desire Z inayo ngoku. Imixholo yokujongana nemeko ngokwezifisokunye Ubungakanani beewijethi, akunakwenzeka ukuvavanya konke. Ukusebenzisana kweSense kubonakala kwizicelo ezingenakubalwa. Abasebenzisi be-Twitter, ukongeza kwisicelo esisemthethweni, ibandakanya enye ephuhliswe yi-HTC, i 'Peep'. Ewe kunjalo ukuhlanganiswa kunye nokuvumelaniswa koqhagamshelwano ne-Facebook, izongezo kwaye oko kukuvumela ukuba uqhagamshele kuGoogle, kuTwitter ... Konke kwenye siyahamba. FriendStream ukulandela abahlobo bakho kwimidiya yoluntu. Bane hlela usetyenziso lweemarike ze-Android, ukususa i-tabo elungileyo kwi "ukulandwa" ngomnye othi "HTC" apho iingcebiso zeHTC Club zifakiwe.
Ukongeza, esi siginali siyavumela ukuvumelanisa ngeakhawunti ye-HTC. indawo yesiphelo. Lo msebenzi ukuvumela ukuba ufumane ifowuni yakho naphi na apho ikhoyo (ukuba ivuliwe kwaye unxibe i-sim yakho). Ngewebhu sinako yenza ifowuni ikhale kwaye uyifumane okanye uvume ukuba ilahlekile (Andinqweneli mntu).
Ujongano lomqondo lubandakanya, njengoko benditshilo, ubuninzi bamawijethi: ikhalenda, umhlobo, i-twitter, i-facebook, i-sms, i-imeyile ... Baya kubonwabisa abo bafuna yonke idatha kuqala kwaye bathande ukusetyenziswa kwebhetri. Ngokususa zonke iiwijethi ungagcina ispike esinomdla kubomi bebhetri esiqinisekileyo ukuba siyaxatyiswa ekupheleni kosuku.
Ingqondo ikwazisa isidlali semidiya esidityanisiweyoOko kuthetha ukuba, inkqubo ye jonga yonke imixholo yemultimedia yesiphelo sakho. Umbukeli we iifoto azichukumisi kangako njengaleyo izisa iirom eziphekwe kwi-3D. Umdlali webhanyabhanya akalunganga, nangona ndikhetha ukusetyenziswa kwezicelo zomntu wesithathu ezingaphezulu kwazo zonke ezixhasa ngakumbi iifomathi. Kodwa ukuba bendiyithanda nyani into, yiyo umdlali womculo. la umgangatho weaudio ubalasele, nkqu nezigcina-ntloko eziza ne-HTC kunye neqhosha leqhosha. Kodwa ukuba uyawuthanda umculo, kwaye unee-headphone ezilungileyo (ndine-Audio Technica ...) uza kuchitha usuku umamele iiyure kunye neeyure zomculo, ngaphandle kokusebenzisa kakhulu ibhetri.
Ukuqhubeka necandelo le-multimedia Ndizakuthetha ngayo iikhamera ikhamera. Ikhamera yokufowuna ividiyo, namhlanje kwaye ngaphandle kwe-Android 2.3.4 ene-Gtalk nevidiyo, ngaphandle kwe ukhetho lwesipili kwaye uzibonele, ayenzi lukhulu. Ye ikhamera engemva, Ewe, kumthambo ofanayo nowandulelayo, i-HTC Desire. Ngelixa iifayile ze Ividiyo ye-720p isebenza kakuhle (Apha ngezantsi ndikushiya iividiyo ezimbalwa endizenzileyo kwaye kubonakala ngathi ayibethi 'ukutsiba') Ikhamera yokufota iyenza kakuhle (Ndishiya iifoto ezininzi apha ngezantsi, kubandakanya ikati yam).
Ngokuphathelele ukusebenzisana nomsebenzisi, Mna, ongenguye umhlobo olungileyo weSense, ndiyavuma ukuba undiphoxile, kakhulu. Ndiyifumene mpazamo Oko bekuvela kwiinguqulelo zonyaka ophelileyo. Isichazi magama sekhibhodi siyintlekele, ndingathethi dire. Umzekelo woku kukuba ayizisi isenzi ukuba sidle okanye ukudibana kwayo. Uza kuchitha usuku ubeka amagama kwisichazi-magama. Enye into yokusilela, engazi ukuba kutheni isenzeka, yile unokubona kuphela abafowunelwa abathandathu bokuqala kuluhlu lwakho. Nokuba uhla njani kuluhlu, xa upopayi luyekile, lubuyela ekuqaleni. Uxolo ke kubahlobo bakho abaphantsi kwe-B, kodwa ngekhe ukwazi ukubabiza ukuba badibane. Inqaku elilungileyo le Olu hlobo lweSense kukuba lulungiselelwe kakhulu. Ayenzi i-lag kwaye oopopayi banamanzi kakhulu.
Ngokubhekisele kwibhetri engakhange ndigqibe ukuthetha ngayo kwelinye inqaku, ibonakale ingcono kunesiNqweno sokuqala, kunye nokunika ukusetyenziswa kweDatha / iWifi, isikrini kwiindaba ze-gtalk ... Inokuhlala i-1 kunye nesiqingatha seentsuku ngaphandle komthwalo ngokugqibeleleyo. Ukuba sele siqalile ukudlala kwaye sicela izixhobo kwifowuni, ngokuqinisekileyo siya kusokola.
Kwinxalenye yokugqibela yolu vavanyo, ndiza kubeka umnqweno S ekusebenzeni okuphezulu. Ndiza kuvavanya imidlalo kwaye siza kubona ukuba i-terminal iphila ngokulindelweyo okanye izakusilela kwezi.
Umxholo wenqaku uyabambelela kwimigaqo yethu imigaqo yokuziphatha yokuhlela. Ukuxela impazamo cofa apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Ukuvavanya i-HTC Desire S (II)
Izimvo ezi-6, shiya ezakho
Shiya uluvo lwakho Rhoxisa impendulo
Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa. ezidingekayo ziphawulwe *
iposi yasekhompyutheni *
Ndiyayamkela imigaqo yabucala *
Uxanduva lwedatha: Okwenziweyo Ibhlog
Injongo yedatha: Ulawulo lwe-SPAM, ulawulo lwezimvo.
Umthetho: Imvume yakho
Unxibelelwano lwedatha: Idatha ayizukuhanjiswa kubantu besithathu ngaphandle koxanduva lomthetho.
Amalungelo: Ngalo naliphi na ixesha unganciphisa, uphinde uphinde ucime ulwazi lwakho.
Ndifuna ukufumana incwadana yeendaba
UJuan pe sitsho
yenzayo 10 iminyaka
Andazi ukuba uthetha ukuthini ngabafowunelwa aba-6, ndinomnqweno omdala kwaye andiqapheli nakuphi na ukusilela endikubonayo.
Phendula uJuan pe
Kwaye ikhamera yangaphambili isetyenziselwa ukwenza iifowuni zevidiyo, kunye nokusetyenziswa njengeTango.
Kwiminqweno yam isenzi sesidlo siyafika….
Phendula nge quote
Kwa into enye yayiza kuthi kwaye iTango ayikho? okanye yintoni?
Ndoda, kukuba ngaphambi kokuba ubhale inqaku kufuneka uzazise kwaye uzibhale ngokwakho.
Ngaphandle kwento yokuba ayisayiniwanga ...
Uyayazi into endiyenzileyo ngefowuni kwaye yintoni? Ndiyazi ukuba itango lenza iifowuni zevidiyo…. Ndinayo gtalk entsha kwezam kwaye ndizamile ukubiza ividiyo nayo. Ukuba i-terminal ibinganikwanga buthule, ngendenze lukhulu kunale ndiyenzileyo.
Ndiyityikitya kuba ndim obhalayo. Ufuna ntoni igama lam?
Isidlo sangokuhlwa asizanga kule nto kwaye iJosema iqinisekisile kwi-s engakholelekiyo kwaye nayo ayizi.
Ndine-Desire S yeeveki ezimbalwa, ndiyithengile ngaphandle kwebhokisi. Iimpazamo zeSense othi andiziboni (inqaku elidlulileyo ukuba ndiyangqinelana), iziphene esinazo kwisoftware ziqhelekile, imenyu yesicelo ayikuvumeli uku-odolwa okanye ukudala amaqela, iiwijethi azinakulungiswa, Isikhangeli asinakho ukukhetha ukusondeza kwi-100%, "i-imeyile" ayikuvumeli ukuba uqwalasele ngokwakho iifolda ze-imap, isifundi sokutya asinandlela yokumakisha iindaba ezifundwayo ukuba awuzivuli, njl. Ziziphene ezincinci uninzi lwazo lweeapps ekwabelwana ngazo. Malunga nekhibhodi ye-HTC, isebenza ngokulungisa iimpazamo kodwa ayisiyo "ikhibhodi yohlobo lwe-T9", andikhange ndiyisebenzise kakhulu kuba ndingumlandeli weSwype kwaye ndicinga ukuba kuthatha i-HTC ukuyibeka kwiifowuni zazo.
Ukubeka iliso kuWhisper, i-firewall kwi-Android yakho
IVIV ye-Android. Usetyenziso lweVoip kunye nemiyalezo
Iindaba kwi-imeyile yakho
Fumana iindaba zamva nje nge-Android kwi-imeyile yakho
Ndiyazamkela iimeko zomthetho
Thumela i-imeyile nge-RSS
Inqobo yokuziphatha yokuhlela